उपहार उमंग- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं — उपहार सबैलाई मन पर्छ । ‘सरप्राइज्ड गिफ्ट’ त झनै गज्जब लाग्छ । हाम्रा सेलेब्रिटीले केकस्तो सरप्राइज्ड गिफ्ट पाएका छन् ? थाहा पाऔं, उनीहरुकै शब्दमा :
जुलाई तीनमा मेरो बर्थ डे थियो । श्रद्धा सिलवाल, मेरो बेस्ट फ्रेन्डसँग त्यो दिन भेट्नै पाइएन । उसले भोलिपल्ट बोलाई । दरबारमार्गको एउटा रेस्टुरेन्टमा हामी भेट्यौं । एकछिनपछि मेरो भाइ, अर्को एउटा साथी र निश्चल (बस्नेत) ‘ह्याप्पी बर्थ डे टु यु...’ भन्दै आए । श्रद्धाले केक पनि ल्याएकी रहिछ । सबै खुसी भएर ताली पिट्न थाले । म चाहिँ अलिअलि नर्भसजस्तो भएकी थिएँ । मेरा लागि अहिलेसम्मकै बेस्ट सरप्राइज्ड गिफ्ट वा सेलेब्रेसन त्यही थियो । यद्यपि, उपहारका रूपमा जे सुकै पाउँदा पनि म एक्साइटेड भइहाल्छु । धेरैजसो मेकअप स्टफ पाउने गरेकी छु ।
फ्यानहरूले थरीथरीका उपहार दिनुहुन्छ । मोबाइल, ट्याब आदि धेरै पाउँछु । यस्ता उपहार पाउँदा अनौठो लाग्दैन । तर, एकपटक अचम्मै भयो । हङकङमा थिएँ । दर्शकसँग इन्ट्रयाक्सन कार्यक्रम थियो । बातचित भइसकेपछि एकजना लेडिज मेरो छेउ आउनुभयो । उहाँले एक डल्लो सुन दिनुभयो । ‘गिफ्ट हो, लिनुस् न’ भनेर कर गरेपछि अनकनाउँदै हात थापेँ । अहिले त्यसको औंठी बनाएको छु । सुन गिफ्ट पाइएला भनेर कहिल्यै सोचेको थिइनँ । सुन होइन, मलाई फूल दिएको भए पनि भइहाल्थ्यो ।
केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), कलाकार
दोस्रो म्यारिज एनिभर्सरीको दिन थियो । तरकारी किन्न गएको श्रीमान् एकैछिनमा घर फर्किनुभयो । पैसा बिर्सिनुभयो होला भन्ठानेँ । तर, दुवै हात पछाडि लुकाउँदै उहाँ त ‘तेरो हात थाप्’ भन्दै कोठामा आउनुभयो । हात थापेँ । पहेँलो रङका दुइटा साना–साना चल्ला राखिदिनुभयो । म झसङ्गै भएँ । ‘बाटोमा जाँदै थिएँ, चल्ला बेचेको देखेँ, यही गिफ्ट दिन मन लाग्यो,’ उहाँले भन्नुभयो । मलाई पनि गिफ्ट मन परेको थियो तर घरबेटीले चल्ला राख्न दिनुभएन । दुई दिन पानी र भात ख्वाएर पालेको चल्ला पछि फुपूलाई दिनुपर्‍यो ।
लुनिभा तुलाधर, रंगकर्मी
कन्सर्टका लागि पोहोर इटहरी पुगेको थिएँ । एकजना महिलाले निकै लामो खालको वस्तु दिनुभयो । फ्यानहरूको गिफ्ट त्यतिसाह्रो लिने बानी नभए पनि त्यो दिन च्याप्पै समाएछुु । आयोजकमध्येका एक जनालाई राखिदिन आग्रह गरेर गीत गाउन थालेँ । के हो, कसो हो यादै गरिनँ । पछि होटल गएर हेर्दा निकै भावुक भएँ । ह्यान्डमेड ग्रिटिङ कार्ड थियो । कार्डभरि मेरो फोटो टाँसिएको थियो, मेरो गीतको टुक्रा लेखिएका थिए, पत्रिकामा आएका मेरा तस्बिरका कटिङ थिए । त्यो बनाउन कति समय र मेहनत लाग्यो होला ! उहाँको सदाशयता देखेर धन्य भएँ ।
परारको तीजमा हो क्या रे, लन्डनमा कार्यक्रम थियो । स्टेजमा मज्जाले गाउँदै थिएँ । दिदी–बहिनीहरू माला र खादा लगाउन स्टेजमै उक्लिरहनुभएको थियो । कोही चाहिँ फोटो खिच्न मलाई तानातान गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यत्तिकैमा दुई जना दिदी सरासर स्टेजमा आएर मेरो हात तान्न थाल्नुभयो । घडी र सुनको चुरा भिराएर अँगालो मार्नुभयो । मैले नाइँनास्ती गर्ने मौका समेत पाइनँ । तर, छक्क परेकी थिएँ । ती उपहार महँगा थिए । ब्रान्डेड घडी र सुन गरेर करिब दुई लाख रुपैयाँको उपहार थियो । पछि ‘त्यस्तो महँगो चीज नदिएको भए हुने’ भन्दा उहाँहरूले ‘ठीकै छ’ भन्नुभयो ।
राधिका हमाल, दोहोरी गायिका
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७४ ०८:५६
‘ज्याकी श्राफ इज माई अलटाइम फेभरेट’
काठमाडौं — कुनै बेलाकी बलिउड डिभाको रूपमा रहेकी अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले ‘डियर माया’ बाट फिल्ममा कमब्याक गरिन् । क्रिटिक्सले उनको अभिनयको राम्रै तारिफ गरे । केही दिनअघि मनीषा राजधानीको गैरीधारास्थित ‘पेरी फेसन आउटलेट’ को उद्घाटन गर्ने क्रममा भेटिइन् ।
उद्घाटनपछि मनीषाले आफूलाई ज्याकी श्राफको फेसन सेन्स मन पर्ने बताइन् । ‘ही इज माई अलटाइम फेभरेट,’ उनले भनिन्, ‘वर्षांैदेखि उहाँले आफूलाई उस्तै राख्नुभएको छ ।’
त्यस्तै, उनलाई अनिल कपुर र नयाँ पुस्तामा नायिका दीपिका पादुकोणको फेसन सेन्स मन पर्ने रहेछ । नेपालको सन्दर्भमा भने उनलाई राजेश हमाल मर्यादित र स्टाइलिस लाग्दा रहेछन् ।
उनी फेसनलाई कम्फर्ट र खोजीको सम्मिश्रण मान्छिन् । ‘म जुन सजिलो लाग्छ, त्यही लगाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘इभेन्ट र पर्वहरूमा मलाई राम्रोसँग ड्रेस अप गर्न मन पर्छ । तर मैले लगाउने प्राय: ड्रेस क्याजुअल नै हुन्छ । सेलेक्ट गर्दा पनि त्यस्तै खालको गर्छु ।’ उमेर सुहाउँदो स्ट्रङ क्यारेक्टरको अफर आए फिल्म पनि खेल्दै जाने उनले सुनाइन् ।
फेसन ट्रेन्डमा नेपाल पछाडि नरहेको उनले दाबी गरिन् । भनिन्, ‘इन्फरमेसन अहिले हाम्रो हातमा छ । फोनमा गुगल गर्‍यो भने विश्वमा चलिरहेको फेसनको ट्रेन्ड थाहा हुन्छ । सबै प्रकारका सूचनाको पहुँच बढिसक्यो । बजार र पब्लिसिटी बलिउडको जति ठूलो नहोला, तर फेसन सेन्समा नेपाल कम छैन ।’
पेरीमा इन्डो वेस्टर्न, नेपाली, राजस्थानी, वेस्टर्न गाउन, सेमी फर्मल डिजाइनहरूको फ्युजनका ड्रेसहरूका साथै पर्स, गहनालगायत रहेको प्रोप्राइटर प्रिया राउतले बताइन् ।